Degso PowerISO loogu talagalay Windows
PowerISO waxay ka mid tahay aaladaha abuurista disc ee ugu caansan ee aad tixraaci karto markay timaado CD, DVD ama faylasha sawirka Blu-Ray.
PowerISO asal ahaan waa barnaamij loogu talagalay in lagu daboolo dhammaan baahiyahaaga ku saabsan feylasha qaabka sida ISO, BIN, NRG, CDI, DAA iyo wixii la mid ah. Adiga oo isticmaalaya PowerISO, waad arki kartaa waxyaabaha ku jira feylasha sawir ee iSO adigoon abuurin disk dalwad ah isla markaana ka soo saar waxyaabaha ku jira galka aad cayimayso. Barnaamijku wuxuu sidoo kale siiyaa sahlanaato weyn dadka isticmaala shaqadan. Iyada oo la adeegsanayo Power ISO, taas oo dhigeysa tuuryo ka kooban menusyada Windows-ka oo lagu furay guji midig, waad u dhoofin kartaa waxyaabaha ku jira adoo si sax ah u riixaya feylasha sawirka.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad gubto CD-yada, aad gubto DVD-yada, aad gubto Blu-Rays, iwm. PowerISO, waxaad uga abuuri kartaa CD-yada muusikada faylasha maqalka ee ku kaydsan kombuyuutarkaaga, sida MP3, FLAC, APE, WMA. Taas bedelkeeda, waxaad ku badbaadin kartaa heesaha CD-yada muusikada kombuyuutarkaaga qaababka cayiman.
Isticmaalka PowerISO, waxaad sidoo kale ku abuuri kartaa feylashaada qaab muuqaal ah qaababka iSO iyo BIN. Waxaad u adeegsan kartaa saxannadaada CD-ga, DVD-yada ama Blu-Ray-ka il ahaan shaqadan, iyo sidoo kale faylasha ku keydsan diskigaaga adag. PowerISO sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad tafatirto oo aad wax ka bedesho waxyaabaha ku jira sawirada ISO.
Waxaad ku dhejin kartaa feylashaada sawirada kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee aad ku abuuri doonto PowerISO waxaadna u isticmaali kartaa feylashaan sawirada kombiyuutarkaaga si caadi ah adigoon u gubin CD, DVD ama Blu-Ray saxannada.
Waxay sidoo kale awood kuu siineysaa inaad u beddesho faylasha sawirka PowerISO qaabab kala duwan. Barnaamijku wuxuu u badali karaa sawirada BIN-ga ISO sidoo kale wuxuu u rogi karaa feylasha kale ee muuqaalka ah ISO.
Waxa kale oo aad abuuri kartaa darawallo USB ah oo la qaadi karo PowerISO. Adoo adeegsanaya muuqaalkan, waxaad abuuri kartaa saxannada USB-ga ee aad u isticmaali karto inaad ku rakibto Windows-ka USB-ga. Sidoo kale, waxaad samayn kartaa bootable CD iyo DVD saxanno.
Fiiro gaar ah: Barnaamijku wuxuu la yimaadaa dalabyo rakibid software dheeri ah. Uma baahnid inaad rakibatid barnaamijyadan dheeriga ah si aad u maamusho barnaamijka.
Horumar: PowerISO Computing